ရော့ခ်ကာ ( လင်းရောင်ခြည် ) : အနက်ရောင် အခန်းဆက်များ
ဇော်အောင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိသည်။ အမှား ပါစရာ တစ်ခုမှ မမြင်။ အရေးကြီး ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့် အစကတည်းက သေချာအောင် လိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးသား။ ခုတော့ ပြသာနာက ၀င်လာပြီ ။ ဒီအတိုင်း ထားလို့ကလည်း မဖြစ်။ ထားလိုက်ရင် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အရာက မသေးလှ။ လက်ကနာရီကိုကြည့်တော့ မနက်ဆယ်နာရီ သာရှိသေးသည်။ ဆိုင်းတွ မနေတော့ပဲ လက်ထဲက ဖုန်းဖြင့် နံပါတ်တစ် ခုကို ခေါ်လိုက်သည်။
“ မင်းပြောတာသေချာလား ။
ဟုတ် ။ သေချာပါတယ် ဆရာ ။
အေး ငါလည်း အမှတ်မမှားပါဘူး။
မှားတယ်ဆိုရင်တော့ ငါလည်း နာ မှာပဲ ။
ငါ ပြန်စစ်ပေးမယ်။ ပြီးမှ ဖုန်း ပြန်ဆက်မယ်။ ”
တစ်ဘက်မှ စကားဆုံးတာနဲ့ ဖုန်း ချ သွားပြန်သည်။ သူကတော့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ အနေထားသာ ကျန်ခဲ့ပြန်သည်။ တကယ်လို့များ အဆင်မပြေခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးကလည်း ၀င်လာခဲ့သည်။ ခုထိ ဘယ်လို ဘယ်ပုံစံ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာလည်း စဉ်းစားလို့မရသေး။ သေချာတာကတော့ ဒီနေ့ အဖို့ သူ ကံမကောင်းပေ။
“ ဆရာ .... နံပါတ်က လွဲနေသလိုပဲဗျ ။ ”
ထိုအသံက မိမိ နောက်ကျောကို စစ်ဖိနပ်ဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်း အကန်ခံလိုက်ရသည်ထက်ပင် ဆိုးနေသည်။ အသံလာရာဆီကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့
ယာဉ်မောင်း မောင်မြင့် ။
“ ဟေ့ ကောင် ။ ဟုတ်လို့လားဟ ။
“ ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ ။
“ ဟေ ........
ဘယ်လို လွဲ တာတုန်းဟ ”
“ အားလုံး တူတယ် ဆရာ ။ ရှေ့နောက် လွဲနေတာ။ ”
မောင်မြင့် ရဲ့ စကားဆုံးတော့ သူ နံပါတ်ပြားကို တစ်ချက် ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်သည်။ ဘာမှမတွေ့ ။ ဒါနဲ့ ဖိုင်ထဲမှ စာအုပ်ကို ထုတ်ယူလိုက်ကာ စာအုပ်မှ နံပါတ် နဲ့ ပြန် တိုက်ကြည့်သည်။ သေချာသွားသည်။ မောင်မြင့် ရဲ့ စကား သေချာသွားလေပြီ။ နံပါတ်က အားလုံးတူနေပြီး ရှေ့နောက် လွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ ခေါင်းပူကာ မျက်လုံး ပြူးသွားသည်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း အမူယာပြင်လိုက်ပြီး
“ မောင်မြင့် ဒီ ကားက ဘယ်နေ့ သုံးမှာလဲ ။ ”
“ သန်ဘက်ခါ သုံးမှာပါ ဆရာ ။ ဘာလို့လဲ ဗျ ”
“ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ငါလည်း အလုပ်ကများနေတော့
ယူလာတဲ့ ဖိုင်တွဲက လွဲသွားတယ်။ ဒီလိုလုပ်ကွာ။
ငါ မနက်ဖြန်ကျမှ ပြန်လာလုပ်ပေးမယ်။
ဒီနေ့က အလုပ်တွေ ပုံနေတော့ ပြန်ရောက်တော့မယ် မထင်ဘူး။ ”
“ ဟုတ် ဆရာ ။
မနက်ဖြန်တော့ ပြီးမှ ဖြစ်မယ်ဆရာ။ ”
“ အေးပါကွာ။ မင်းကလည်း
ငါ မသိပဲ နေပါ့မလားဟ ။ ”
မောင်မြင့် ထံမှ ထိုစကားကို ကြားပြီးနောက် တပ်ထားတဲ့ စကူတွေကို ပြန်ဖြုတ်ကာ နံပါတ်ပြားကို ပြန်သိမ်းလိုက်ရသည်။ ထို့နောက် သူ ထိုနေရာမှ ထွက်လာ ခဲ့လိုက်သည်။ ထိုနေရာမှ ထွက်လာခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေသည်။ ခေါင်းပေါ်မှာလည်း မီးဖိုတစ်ခု တင်ထားသလို ခံစားနေရသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်ထိ ကံကောင်း နေသေးတယ်လို့ ပြောနိုင်သေးသည်။ ဒါကလည်း မောင်မြင့် ကြောင့် ဆို မမှားပေ။ မောင်မြင့် မပြောခဲ့ပါက သူ ဒီနံပါတ်ပြားကို တပ်ခဲ့မိမှာ။ တပ် ခဲ့ပါက ဖြေရှင်း ချက်ပေးရမှာက လွယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်။ သူ့ နေရာ ၊ သူ့ အလုပ်ကို သူသာလျှင် အသိဆုံး။ အလျှောက်ကောင်းတော့ အထောင်း သက်သာဆိုပေမယ့် တာဝန်ပေါ့လျော့မှု ဆိုတာ ကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်။ အသိမြန်လို့ ရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကိစ္စက မပြီးပြတ်သေး။ အချိန်ကလည်း တစ်ရက်သာ ရှိနေသည်။ မောင်မြင့် ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။
သူ ချက်ချင်းပင် ကားဝင်းကို အလျင်မြန်ဆုံး သွားလိုက်တော့သည်။ ဖိုင် နဲ့ နံပါတ်ပြား ကို ရန်ကုန် ထွက်မည့် ကားတစ်စီးပေါ်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန် ကို ဖုန်း ပြန် ဆက်ရသည်။ ရန်ကုန်ဘက်က တစ်ရက်နဲ့ အလုပ်မပြတ်ပါက သူသေပြီ။ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာလည်း စဉ်းစားကမရ။ ရတဲ့ အချိန် တစ်ရက် တည်းနှင့် မလွယ် ဆိုတာကိုလည်း သူသိနေသည်။ သူ့ ဘက်က လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို လုပ်ပြီးပေမယ့် စိတ်ကမအေးနိုင် ဖြစ်နေသည်။ အလုပ်ရှုပ်ရတာထက် စိတ်ရှုပ်ရတာက ပိုပင်ပန်းနေပြန်သည်။ သူ ပြန်တွေးကြည့်သည်။ ဘယ်နေရာ မှာ ဘာများ မှားနေခဲ့သလို့။ တစ်နေရာမှ အမှားကို ရှာမရ။ စာရွက်စာတမ်းသာမက ၊ နံပါတ်ပြား အဟောင်း ပါ တင်ပေးပြီး သား။ ဒီထက် သူ့ဘက်က သေချာစရာလည်း မရှိတော့။ ခုတော့ သူ ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်။ သူ့ရဲ့ ကံကောင်းမှုက ဘယ်အချိန်အထိ သက်တမ်း ရှိနေမလဲ ဆိုတာ ကိုသာ ဆုတောင်းနေရုံမှတပါး တခြား မရှိပေ။
ဒီနေ့ ရုံးထဲတွင် လူတစ်ယောက် သောင်းကျန်းနေသည်။ ထိုသူကြောင့် တစ်ရုံးလုံး ငြိမ်ငြိမ်မနေရပဲ အလုပ်တွေ ရှုပ်ကုန်ကြသည်။ ထိုသူ တစ်နေကုန် သောင်း ကျန်းနေပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်သူမှ ဘာမျှ မပြောရဲ ။ အကြောင်းက သူသည် ထိုရုံးတွင် အကြီးဆုံးရာထူးကို ရယူထားတဲ့ ညွှန်မှူး ဘကြိုင် ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ ဘကြိုင်ရဲ့ ဒဏ်ကို ရာထူးနိမ့် ၀န်ထမ်းတွေ ရုံးဆင်း ချိန်မှာ လွတ်ကင်းသွားပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲတွေရှိ အကြီးဆုံးသူတွေ နဲ့ အရေးပါသူတွေကတော့ မလွတ်သေးပေ။ သားရေး ၊ သမီးရေး ၊ မိသားစု အရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင်အရေး ကိစ္စတွေ လျစ်လျူ ရှု့ထားကြရသည်။ ပြသာနာ မပြီးမချင်း အိမ်ပြန်ရမည်လည်း မထင်ကြပေ။ သူ ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်ပြန်မည့် ပုံ မပေါ်။
“ မောင်မျိုး ။ ”
“ ဗျာ ဆရာ ။
ဘာ ခိုင်းမလို့လဲမသိ။ ”
“ နံပါတ်ပြား ရိုက်တဲ့ နေရာကိုသွား။
အဲ့က တာဝန်ခံကို ခေါ်လာခဲ့ ။ ”
“ ဟုတ်ဆရာ ။ ”
စကားဆုံးတာနဲ့ မောင်မျိုး အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ မောင်မျိုး ရဲ့ ကျောပြင်ကို ကြည့်ပြီး ဘကြိုင် သက်ပြင်းချမိသည်။ တစ်ခါမှ ကိုယ့် ငယ်သားတွေကို ဒီလောက် မကြိမ်းမောင်းဖူးပေ။ အားလုံးကို ညီအစ်ကို မောင်နှမလို ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ရုံးက သူ့ကို ချစ်ကြောက်ကြသည်။ ဒီနေ့တော့ သူ မတတ်နိုင်ခဲ့။ ၀င်လာတဲ့ ကိစ္စ က မသေးတော့ အားလုံးကို မဖြစ်မနေ ကြိမ်းမောင်းရတော့သည်။ သို့မဟုတ်ပါက တစ်ရုံးလုံးကို တခြားသူ လာပြီး ကြိမ်းမောင်းမှာက သေချာသလောက် ရှိသည်။ ငယ်သား တွေမှာ မိသားစု အရေး ၊ စားဝတ်နေရေးတွေ ရှိနေသည်။ သူတို့ကို မှီခိုနေသူတွေ ရှိနေသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ အနေထားတွေကို မပျက်ယွင်းစေချင်။ ရုံးမှာ အကြီးဆုံးရာထူးကို ယူထားသူပီပီ နောက်ဆုံးအချိန်အထိတော့ သူ ကြိုးစားရပေဦးမည်။ မရှောင်နိုင်လို့ တာဝန်ခံရမည် ဆိုပါကလည်း သူတစ်ယောက်တည်းသာ တာဝန်ခံ ရန် တွေးထားသည်။ ဒါကြောင့် အမှားပါနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို အစအဆုံး ပြန်စစ်နေသည်။ အရေးမကြီးတာတွေကို နောက်ရက် ရွှေ့ထားသည်။ တတော်များများ စစ်ဆေးပြီးပေမယ့် အဖြေက ထွက်မလာသေး။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အားလုံးကလည်း အ၀င် ထွက်တွေ မှန်နေသည်။ ဌာနခွဲ အားလုံးလည်း ကိုက်ညီနေသည်။ စစ်ဆေးစရာ တစ်နေရာသာ ကျန်နေတော့သည်။ ထိုနေရာသည် နံပါတ်ပြား ရိုက်သည့်နေရာ။
ဘကြိုင် အတွေးလွန်နေစဉ်မှာပဲ အခန်းထဲကို မောင်မျိုး ပြန်ရောက်လာသည်။ သူနဲ့အတူ နံပါတ်ပြားရိုက်တဲ့ တာဝန်ခံ ပါလာသည်။ တာဝန်ခံယူလာတဲ့ ၀င်စာ စာရင်းတွေ ကို ပြန်စစ်ကြည့်သည်။ အားလုံးကွက်တိ အမှားမရှိပေ။ သို့ပေမယ့် စိတ်တိုင်းမကျသေး။ အထွက် စာရင်းကိုပါ စစ်ကြည့်လိုက်သည်။ ဘကြိုင် စာရင်းကို ကြည့်နေ စဉ်မှာပင် မျက်လုံးက အရောင်တွေ လက်လာသည်။ သူ တွေ့ပြီ။ လိုချင်နေတဲ့ ဘယ်နားမှားသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရပြီ။ စုတ်တစ်ချက် သတ်လိုက်ပြီး တာဝန်ခံကို စိုက်ကြည့် လိုက်သည်။ သူ့ အကြည့်မှာပင် တာဝန်ခံ နေစရာ မရှိလောက်အောင် အမူယာ ပျက်နေပြီ။ ဘကြိုင် သက်ပြင်းတစ်ချက် ထပ်ချမိလိုက်သည်။ အမှန်တော့ ရက်ရက်စက်စက် ကြိမ်းမောင်း ဦးမလို့။ ဒါပေမယ့် မပြောချင်တော့။ တစ်နေကုန် ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေရသည်မို့ ဘကြိုင် ဆက်မဆူချင်တော့။ အားလုံးသည် လူသားတွေပဲမို့ အမှားကင်းနိုင်မည် မဟုတ်ဆိုတာ နားလည်နေသည်။ ဘကြိုင် တာဝန်ခံကိုမေးလိုက်သည်။
“ နံပါတ်ပြား ဘယ်သူ ရိုက်တာလဲ “
“ အောင်လှ ပါ ဆရာ “
“ ရုံးမှာ ရှိနေသေးလား ”
“ ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါပြီဆရာ “
“ ပြန်ခေါ်လိုက်။ ရောက်ရာ အရပ်ကနေ အမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်။
တစ်ဖွဲ့လုံးကို ပြန်ခေါ်။ လူစုံရင် ဒီ နံပါတ်ကို ချက်ချင်း ရိုက် ။
ပြီးရင် ငါ့ကို လာခေါ် “
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ “
` မောင်မျိုး ....
ကျန်တဲ့ သူတွေ ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့ ´
` ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ´
ဘကြိုင် အခုမှ နေသာထိုင်သာ ရှိသွားတော့သည်။ ရင်ထဲမှ အပူလုံးကြီးလည်း ကျသွားသည်။ ကိစ္စမပြတ်သေးပေမယ့် အဖြေကို တွေ့ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပြီ။ တစ်ဆက် တည်းမှာပဲ စားပွဲပေါ်မှ ဖုန်းဖြင့် နံပါတ်တစ်ခုကို ကောက်နှိပ်လိုက်သည်။
“ အေး ... ဇော်အောင်လားဟေ့ ။ ”
“ အကို ဘာဖြစ်လာတာလဲ ၊
မျက်နှာလည်း မကောင်းဘူး။ ”
ထမင်းဝိုင်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေတဲ့ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ စကားကို ဇော်အောင် ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမယ်မသိ။ အမှန်တိုင်းပြောပြရင် စိုးရိမ်လွန်ကာ စိတ်ပူသွား မလား တွေးနေမိသည်။
“ အကို မေးတာဖြေဦးလေ ”
နောက်တစ်ခါ ထပ်မေးလာတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အမှန်တိုင်းပဲ ပြောပြလိုက်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး .....
“ အေးပါကွာ ။ ပြောမှာပေါ့။
ဒီလိုဟေ့ ၊ ဒီလို ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးရက်လောက်က ကားတစ်စီး လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖို့ လာအပ်တယ်။
လာအပ်တဲ့ ကားက နှယ်နှယ်ရရမဟုတ်ဘူး။
ဘိုးတော် အိမ်က ကား ။
အမြတ်မရပေမယ့် နာမည်ရချင်တာနဲ့ ငါလည်း လက်ခံခဲ့တယ်။
အရေးကြီးတဲ့ ကားဆိုတော့ အမှားမပါအောင် ဂရုတစိုက် ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ရတယ်။
မနေ့က အားလုံးပြီးသွားတယ်။ ပြီးပြီးချင်းပဲ နံပါတ်ပြားရော ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေရော ကားနဲ့ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။
ကားတောင် စိတ်ချရတဲ့ ကားနဲ့ ပြန်တင်ပေးတာ။ အမှားပါမှာစိုးလို့။
ဒါမယ့် ဒီနေ့ ပြသာနာက ၀င်လာတယ်။
နေပြည်တော်ကနေ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ကားနံပါတ်ပြားက လွဲနေတယ်တဲ့ ။
ရုံးက ညွှန်မှူးကိုတော့ ပြန်ပြောထားတယ်။
ဖုန်း ပြန်မဆက်သေးလို့ စိတ်ပူနေတာ။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲတော့ မသိသေးဘူး။ ”
စကားဆုံးတော့ မိန်းမ မျက်နှာ ညှိုးသွားတာကို သတိထားမိလိုက်သည်။ ထမင်းဝိုင်းလည်း ခဏမျှ တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
“ အကိုရယ် သိပ်လည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့။
ဘယ်နေရာမှာ မှားသွားလည်း ပြန်စစ်ပါဦး။
အဖြေတော့ ရှိမှာပါ။ ”
ငါ့ အပိုင်းမှာတော့ မမှားတာသေချာတယ်။
လူကြီးကလည်း ပြန်တော့ စစ်ပေးနေတယ်။
အကြောင်းမပြန်သေးတော့ စိတ်မချနိုင်သေးဘူး။ ”
“ ဖြစ်လာမှတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ အကိုရယ်
ကိုယ့်ဘက်က မမှားရင်ပြီးတာပဲ ။
ကဲ ထမင်းတော့ စားလိုက်ဦး။
ဟင်းတွေ အေးကုန်တော့မယ်။ ”
မိန်းမရဲ့ စကားဆုံးတော့ ဇော်အောင် ဘာမျှ ထပ်ပြောမနေတော့ပဲ ထမင်းစားလိုက်တော့သည်။ ထမင်းစားနေရင်းကမှ ညွှန်မှူး ထံမှ ၀င်လာမယ့် ဖုန်း ကိုလည်း မျှော်နေမိသည်။ ဗိုက်ကဆာနေပေမယ့် လည်း ဇော စိတ်ကြောင့် စားရတာ တစ်စက်မှ အရသာ မပါတော့ပေ။
ဒီနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့် ဇော်အောင် အိမ်မှာ အနားယူလို့ ကောင်းနေသည်။ ထို အချိန် ဖုန်း မြည်သံကြောင့် ဇော်အောင် ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ညွှန်မှူး ဘကြိုင်ထံမှ ဖြစ်နေသည်။
“ ဟလို ... ”
“ အေး ... ဇော်အောင်လားဟေ့ ”
“ ဟုတ်ပါတယ် ဗျာ။ ”
“ မင်း အားတယ်မဟုတ်လား။
ငါလည်း ဂေါက်ကွင်းက နေပြန်တာ။
ထမင်း စားရအောင် လာခဲ့ပါလားကွ။
စကားလည်း ပြောရင်းပေါ့ကွာ။ ”
“ ဟုတ် ... ဗျာ။
“ အေး ... အေး ... ပြီးရော
ခါတိုင်း ဆိုင်ပဲလာခဲ့ကွာ ”
ဇော်အောင် လမ်းပေါ်မှ အငှားယာဉ် တစ်စီးကို ငှားကာ ချိန်းဆိုထားရာ စားသောက်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ဆိုင်ကို ရောက်တော့ ညွှန်မှူးဘကြိုင် က ကြိုရောက်နေပြီ။ ဘကြိုင်က ဇော်အောင့် ကို မြင်တာနဲ့ .....
“ လာဟေ့ ... ထိုင်။ ”
ဇော်အောင် စားပွဲမှာ အလိုက်သင့် ၀င်ထိုင်ပြီးနောက် ဘကြိုင်ကပင် ....
“ ဘယ်လိုလဲ ။ ဟိုတနေ့က ကိစ္စ အဆင်ပြေသွားတယ်မဟုတ်လား ”
“ ဟုတ် ဆရာ ။ ပြေသွားပါပြီ။
တော်သေးတယ်ဗျာ။ အချိန် မှီ သွားလို့။
ဟိုမှာလည်း ဗိုလ်မှူး သီဟ က ခေါင်းကြီးနေပြီ။
မနက်မှာ သူ့ဆီ ဖိုင် ပြန်ရောက်သွားလို့။
မဟုတ်ရင်တော့ သူလည်း နာပြီ ။ ”
“ အေး .... အလုပ်က ဒီလိုပဲကွ။
ပြသာနာက ၀င်ချင်ရင် ၀င်လာတာပဲကွ။
ကိုယ်တွေက ၀န်ထမ်းဆိုတော့လည်း ဒီလိုပဲပေါ့ကွာ။ ”
“ အမှားက နံပါတ်ပြား ရိုက်တဲ့ သူက မှားရိုက်မိတာ။
နံပါတ်ရိုက်ဖို့ ပို့ပြီးတဲ့ အချိန်ထိ ဘာအမှားမှ မပါဘူးကွ။
တကယ်တော့ သူတို့ကို အပြစ်တင်လည်း အပိုပါပဲကွာ။
နံပါတ်တွေက ရိုက်ရတာများတော့ သူတို့လည်း မှားတာပေါ့ကွာ။
မှားတာက တခြားကားကို မမှားပဲ
ဘိုးတော် အိမ်က ကားကျမှ လာမှာတော့ ”
“ ဟုတ် ဆရာ ။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုကို မပို့ခင် တစ်ခါစစ်ကြည့်သေးတယ်။
နံပါတ်က အားလုံးတူနေပြီး ရှေ့နောက်လေးပဲ လွဲနေတော့ သတိမထားလိုက်မိဘူး။ ”
“ ကဲပါကွာ။ ပြောမနေနဲ့တော့ ။
မှာထားတာတွေ အေးကုန်တော့ စားလိုက်တော့။ ”
နှစ်ယောက်သား စားသောက်နေကြတာကြောင့် စားပွဲဝိုင်းက ခဏမျှ အသံတိတ်သွားသည်။ စားသောက်ပြီးနောက် ဘကြိုင်က
“ ဒီ တစ်ခါ ငါ့ အမှားရှိထားတယ်ဆိုတော့ ဒီ ဘေလ် ကို ငါပဲ ရှင်းမယ်။ ”
“ အော်.... မင်းကို ပြောစရာ ရှိသေးတယ်။
မနက်က ဖုန်း ၀င်ထားသေးတယ်။
လိုချင်တဲ့ နံပါတ်က အသစ်မဟုတ်ပဲ အဟောင်းကြီး။ ထုတ်ပေးပြီးသားကြီး။
ရုံးမှာတော့ ပိုင်ရှိင်ရဲ့ လိပ်စာတွေ ကားအမျိုးစားတွေ အကုန်ပြန်ရှာခိုင်းထားတယ်။
အဲ့ဒါ မင်းငါ့ကို ကူညီဦးကွာ။ ”
“ ဟုတ် ဆရာ ။ ဒါနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာ။
နံပါတ်အဟောင်းကြီးကို ဘာလို့များ လိုချင်ရတာလဲ။ ”
“ ဒါတော့ ငါလည်း မသိဘူး။
ဟိုက လုပ်ပေးပါဆိုမှတော့ လည်း ငါတို့ ရအောင် လုပ်ပေးရတော့မှာပဲ။ ”
“ ဟုတ် ဆရာ ။ ကျွန်တော် ကူညီပေးပါ့မယ်။
ဒါနဲ့ ဒီနံပါတ် အဟောင်းကြီးကို ဘယ်သူက လိုချင်တာလဲဗျ ”
“ မင်း ကလည်း ဘယ်သူရှိမလဲကွာ။
ဒါမျိုး ကို့ယို့ကားယား လုပ်တာ အဘ သမီး တစ်ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ဟာ ။ ”
ဇော်အောင် ဘာမျှ ဆက်မမေးဖြစ်တော့ပါ။ မေးဖို့ရန်လည်း မလိုအပ်တော့ပါ။ မော်တော်ကားတွေ ရှိနေသရွေ့ ၊ သူ ကားလိုင်စင် အေးဂျင့် လုပ်နေသရွေ့ ကတော့ ဒီလို ကြုံတွေ့နေရဦးမည်ဟုသာ ယုံကြည်နေလိုက်မိသည်။ ရှေ့ဆက်ရမယ့် မနက်ဖြန် များစွာအတွက်ကိုတော့ အနက်ရောင် ဖုံးလွှမ်းတဲ့ နေ့ရက်တွေ မဖြစ်အောင်တော့ ရင်ထဲ ကနေ ကြိတ်ပြီး ဆုတောင်းနေမိတော့သည်။
26 .3. 2015
12 : 07 ( PM )